Qorshayaasha Midabbada Qolka Hurdada - Hurdadaada Ka Dhig Mid Wanaagsan Adigoo Doorta Midabka Rinjiga Saxda Ah Ee Saxda Ah - Bedroom Colour Schemes
Qorshayaasha Midabbada Qolka Hurdada – Hurdadaada Ka Dhig Mid Wanaagsan Adigoo Doorta Midabka Rinjiga Saxda Ah Ee Saxda Ah
Ma ogeyd in midabka rinjiga gidaarka qolka jiifku uu si weyn u saameeyo tayada nasashada? Ka sokow awood u lahaanshaha inaad bixiso jawi raaxo leh, xulashada midabka qolka hurdada saxda ah wuxuu saameyn wanaagsan ku yeelan karaa caafimaadka shucuurta.
Qolka jiifka oo shaqadiisa ugu weyn ay tahay meel lagu nasto ka dib maalin hawl badan oo daallan, iyada oo aan la garaneyn waxay sidoo kale noqotay meel aan yareynno ‘daalka shucuurta’, jiifka, ama meel lagu akhristo buugaagta ama telefishanka lagu daawado iyadoo aan la jiifin dadka kale ku wareeriyaan.
Nasiib darrose, inbadan ayaan fahmin sida loo doorto midabka midabka derbiga saxda ah ee lagu dabaqo qolka jiifka. Badanaa, midabka la xushay waa midab / doorbidis midab ama mid cad oo leh sabab nadiif ah ama dhalaalaysa. Xaqiiqdii, midab kasta wuxuu leeyahay aragti kala duwan. Xulashada midabada aan qummanayn waxay sababi kartaa caajis, waxay saameyn ku yeelanaysaa niyadda oo hoos u dhacda, waxayna xitaa kaa dhigi kartaa inaad awoodid inaad nasan karto sababtoo ah midabada loo adeegsaday cilmi-nafsi ahaan.
Qorshayaasha Midabka Qolka jiifka ee lagula taliyay Rinjiga Darbiga Qolka jiifka
Kuwa soo socdaa waa midabada qolka jiifka ee aan doorannay inay kaa caawiyaan inaad si deggan oo deggan ugu xasilloonow.
Qorshayaasha Midabka Qolka jiifka # 1: Cagaaran
Midabka cagaaran ayaa la rumeysan yahay inuu siinayo dareenka qol dabiici ah oo dheeri ah si ay ugu fidiso jawi wanaagsan qolka dhexdiisa. Midabka la xidhiidha midabada dabiiciga ah, sida caleemaha, cawska, jawiga buurta ayaa ka dhigaya jawiga qolka inuu noqdo mid deggan oo deggan.
Xullo cagaar caleen, cagaar khafiif ah ama cagaar cawlan. Midabada deganaanta iyo xasiloonida ee lagu rinjiyeeyo gidaarkan marka laga reebo inay sababaan xasillooni waxay gacan ka geysan kartaa dhiirrigelinta maskaxda aadanaha si ay si dhaqso leh u dareento degganaan. Natiijadu waa hurdo aad u deggan oo nasata oo caajis noqota ka dib markii aad toosiso oo aad dareento firfircooni iyo firfircoonaan badan.
Qorshayaasha Midabka Hurdada # 2: Bulug
Ka sokow cagaarka, waxaad dooran kartaa buluug midab matalaya dabeecadda. Buluug khafiif ah, buluug-buluug ah, ama buluug buluug ah ayaa kuu qaadan doona sidii adigoo ku yaal geeska badda. Dareenka dabiiciga ah, nadiifka ah, dhalaalaya, iyo qabow ee uu midabkani leeyahay ayaa hurdadaada ka dhigi doona mid wanaagsan.
Sida cagaarka ah, hirgelinta midabada gidaarka rinjiga leh buluug sidoo kale waxay bixin kartaa jawi wanaagsan. In kasta oo lagu daro midabada kor u qaadi kara, buluug ayaa keenaya aragti qabow si aad si fudud aad ugu seexan karto.
Qorshayaasha Midabka Hurdada # 3: Beige
Beige, oo ah isku dhafka bunni iyo caddaan, waxaa lagu soo daray midab jilicsan oo deggan. Midabkani wuxuu dadka ku dhex jira ka dhex dareemi karaa deganaan iyo deganaan si ay si fiican u nasan karaan. La yaab ma leh in midabkani si balaadhan loogu isticmaalo hoteellada xiddigaha si ay uga dhigaan martidooda guriga.
Qorshayaasha Midabka Hurdada # 4: Cawlan
Isku dar midabka cawlan ee gidaarada darbiyada alwaax ah, ka dib qol dareemaya diiran oo raaxo leh ayaa ka dhigaya in tayada nasashadaadu fiicnaato. In kasta oo lagu daro midabada firfircoon iyo kuwa casriga ah, doorashada midabkani sida midabka rinjiga qolkaaga jiifku wuxuu siin karaa muuqaal ah mid ballaadhan oo nadiif ah. Waxay ku habboon tahay qolalka jiifka yar.
Hadda, kee baad u malaynaysaa midabka gidaarka midabka aad dooran lahayd? Oh haa, maskaxda ku hay in si aad u hesho jawi raaxo leh qolka jiifka, ka dibna waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa la qabsashada midabka gidaarka qolka jiifka iyada oo xulashada midabka saxda ah. Iska ilaali midabyada ama midabbo aad u madow maxaa yeelay waxay abuuri doontaa aragti aan wanaagsanayn.
Talooyin Smart ah oo loogu talagalay Abuurista Qolka jiifka ee raaxada leh oo leh Qorshayaasha Midabka Qolka jiifka
Kahor intaadan ogaanin Qorshayaasha Midabbada Qolka jiifka ee caafimaadka u wanaagsan, marka hore, ogow talooyinka ku saabsan abuurista qolka jiifka raaxada leh ee hoose. Qol raaxo leh ayaa dhab ahaantii leh gudaha oo si taxaddar leh loogu talagalay, oo ay ka mid yihiin xulashada midabada rinjiga iyo alaabta guryaha oo ku habboon. Waa kuwaan tusaalooyin qaarkood oo lagu dabaqi karo abuuritaanka qol raaxo leh.
Xullo midabbo dareen leh oo xasilloon si aysan kaaga dhigin inaad soo jeeddo oo aad dareento hurdo la’aan.
Sii muuqaal ballaadhan, in kasta oo qolku dhab ahaan leeyahay cabbir aan aad u weyneyn.
Xulo ciyaarta saxda ah ee u dhaxeysa midabka ranjiga iyo alaabta guriga. Midabada dhexdhexaad ah ee ku habboon dhammaan midabada ayaa ka fiican.
Ha ku ururin waxyaabo badan qolka. Xullo shey shaqeynaya oo qolka looga baahan yahay.
Markaad subaxdii tooso, midabka jaalaha ahi wuxuu kaa caawin karaa inaad ku bilowdo maalinta xamaasad badan. Midabkani wuxuu kaloo kaa ilaalin doonaa walbahaarka. Dooro midabka jaallaha ah ee ugu jilicsan si aysan kaaga dhigin inaad aad u faraxsanaato habeenkii.
Asal ahaan, ma jiraan daraasado kale oo dheeraad ah oo ku saabsan midabada midabada jiifka ee caafimaadka u wanaagsan. Marka saamaynta midabku qofkasta wuu ka duwanaan karaa. Xitaa sidaas oo ay tahay, dooro midabka kaa dhigaya deganaansho iyo xasillooni si aadan u la kulmin cilado hurdo ah caafimaadkaadana sidoo kale aan la joojin doonin.
Midabku aad ayuu ula xiriiraa dhadhanka sidaa darteed qof walba xaqiiqdii wuxuu leeyahay xulasho kaladuwan. Haddii midabka aad jeceshahay aan lagu darin midabka abuuri kara dareen raaxo leh, laqabso xulashada waxyaabaha kale ee qurxinta qolka. Midabada Calmer way xukumayaan, laakiin taasi micnaheedu maahan inayna jirin midabyo kale oo qolka kor u qaadi kara. Marka, ku raaxayso sahaminta nooca ugu wanaagsan ee Qorshayaasha Midabbada Hurdada!